Edition Steam FSX FSX Help
Su'aal Edition Steam FSX FSX Help
sano 2 5 bilood ka hor #52 by Dariussssss
Haddii aad la kulanto dhibaato, qalad ama haddii aad xoogaa su'aalo ah oo ku saabsan Aadan Qabille FSX ah, halkan boostada. Sidoo kale noo sheeg oo ku saabsan la rajeenayo iyo xal dhibaatooyinka kala duwan iyo khaladaadka ku jira FSX.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: johnbrowning
10 bilood 1 toddobaad ka hor #1183 by flaps1262
Gacaliye gacaliye ah, waxaan la kulmay dhibaatooyin si aan u rakibno minipanels-ka la soo qaaday ee A320 ee daabacaadda FSX. Waxaan bedelayaa tilmaamaha minipanel (guddi ku jira guddiga) ee faylka diyaaradaha ee diyaaradda laakiin minipanel asalkiisu isma bedelin. Caawimaad kasta
Waad ku mahadsantahay horey u-heshay caawimadaada, waxaad u daneyneysaa.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.387